1954-1964 Evinrude 5.5 HP soavalin-dranomasina Tne-UP Project Varingarin'i Head Maintenance | Outboard Boat Motor Repair
1954-1964 Evinrude 5.5 HP soavalin-dranomasina Tne-UP Project Varingarin'i Head Maintenance
Raha mandova ny iray amin'ireo motera sambo taloha ireo ianao ary tsy azonao antoka ny tantarany, dia tsara ny misintona ny lohan'ny varingarina ary mijery izay ao ambany. Esory ny bara Ampiasao ny wrench 7/16, esory ny bolt folo mitazona ny lohan'ny varingarina. Aforeto moramora moramora ny lohan'ny varingarina mba hamakiana ny tombo-kasen'ilay lohan-doha.
Tokony hisolo ny lohany gasket amin'ny vaovao.
Head Gasket OMC ampahany laharana 303438 NAPA / Sierra Fizarana laharana 18-2885
Rehefa tsy eo intsony ny lohan'ny varingarina dia ario, diovy, ary zahao ny rindrin'ny varingarina, piston ary lohan'ny varingarina. Diniho ihany koa ireo lalan-drano manodidina ireo varingarina. Mampiasà fantson-drivotra, tsofy ary diovy ny lalan-drano. Nampiasa borosy tariby kely aho hanadiovana ny karbaona tamin'ny piston sy tao anatin'ny lohan'ny varingarina. Aza variana manadio an'io karbonina io. Raha manadio be loatra ianao ary midina metaly miboridana, dia afaka mamorona "faritra mafana" amin'ny piston ianao. Tsy mila hadio tanteraka ianao. Ara-dalàna ny karbaona sasany.
Rehefa avy Fanadiovana
Ny iray amin'ireo antony lehibe hanesorana ireo lohan'ny varingarina mankany ch mba hahazoana antoka fa tsy voadona ny loha. Rehefa mandeha ny fotoana, miaraka amin'ny hafanaina sy ny fampangatsiahana, indrindra raha mafana be ny motera, mety hikona ny lohan'ny varingarina. Koa satria tsy manana milina fikosoham-bary aho dia apetrako tsotra fotsiny eo amina vera na zavatra fisaka ny ravin-drakitra ary afindrao ao anaty lamina boribory ny lohan'ny varingarina mandra-pisaka ny velaran'ny fanambadiana. Azonao atao ny milaza hoe fisaka ny atiny satria hanana metaly manjelanjelatra mamirapiratra hatrany amin'ny manodidina ny lohan'ny varingarina ianao.
Atsofohy amin'ny diloilo boribory 2 ny gasket an-doha vaovao ary atodiho hiverina amin'ny lohan'ny motera ny lohan'ny varingarina. Ny lavaka eo amin'ny lohan'ny varingarina dia tsy simetrika ka tsy hiverina amin'ny làlana diso ny loha. Mety mila mihodina ny loha 180 degre ianao raha toa tsy milahatra ny bolt. Aza hadino ny manisy kofehy. Toa mieritreritra ny rehetra fa ny tery loha dia mila tena tery. Tsy hikapoka ny loha fotsiny izany. Avereno indray, henjana fotsiny ny ampahefatry ny tapany. Rehefa manenjana ireo bolts ireo ianao dia mila mametaka ireo tadina mifanohitra amin'ny hariva mandra-panafinao azy rehetra ary avy eo miverimberina mandra-pahatonga azy ireo hanamafy ny fihodinanan'ny telovolana. Amin'ity fomba ity ny loha dia hampifandraisina tsara amin'ny sakana.